UJUSTIN TIMBERLAKE UTYHILA INDLELA ACEBISE NGAYO UJESSICA BIEL - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UJustin Timberlake utyhila ngokuchanekileyo indlela acebise ngayo kuJessica Biel
Ngu: Esther Lee 02/02/2018 ngo-4: 48 PM
Indawo efanelekileyo yokuthenga iilokhwe zontombi kwi-intanethi
Uthethathethwano… lwakhiwe ngokutsha. UJustin Timberlake Icwecwe elitsha ngoku liphumile ngaphambi komdlalo wakhe weSuper Bowl wamanqam ngeCawa, eyoMdumba 4. Njengoko kwakuthenjisiwe, igcisa liba buqu malunga nolwalamano lwalo UJessica Biel -Zimbini kumagama kunye nakwinkcazo ejikelezileyo- ezibandakanya iinkcukacha ezintsha malunga nendlela acebise ngayo ekuqaleni kuka-2012.
Nangona eyaziwa ngokubanzi, i-pop superstar ekugqibeleni iqinisekisiwe Umculo weAmazon Ucebise ukuba uBiel eMontana, ikwayisihloko esinye seengoma zakhe. Imalunga nokubakho kunye nenkosikazi yam, i Indoda yeMithi imvumi iqaphele. Ndacebisa apho, ke inentsingiselo ekhethekileyo. Yiloo nto kanye eyaqala kuyo. Inene ngalo mzuzu xa usithi, 'Ndifuna ukwenza eli nyathelo.'
Kum, ngokuthetha, ibhulorho yeyona ndiyithandayo, uqhubeke. Ndicinga… mhlawumbi ibhulorho yam endiyithandayo kwicwecwe, kanye ngendlela endikwazi ngayo ukufumana amazwi ayo.
Ibhulorho yengoma iyahamba: Ngoku ndiyazi ukuba kuhlwile / kwaye sele si-kissin 'iiyure / Xa inyanga ivusa ilanga / Kwaye izithunzi zethu zaphakanyiswa ezintabeni / Inika iinkwenkwezi somethin ’ukuba zibukele.
Ngaphandle kokungena kakhulu kwibali lomntu, laqala ukudibana ngokwenene lithetha ngokuba sezintabeni, uTimberlake wongeze kwincoko yakhe no IAmazon . Xa ndenza isindululo, bendisithi kuye, bendifana, 'Hayi jonga izithunzi ezisezintabeni,' kwaye bendiphethe umsesane kwipinkie yam-ndiyacinga ukuba ndiza kuxelela nje ibali. Ndandinomsesane epinki yam kwaye ndandifana, 'Jonga izithunzi phaya ezintabeni,' kwaye wayefana, 'Ewe, intle loo nto,' kwaye bendifana, 'Uyayibona?' Ke yayiyinto eyakhuthaza amazwi ebhulorho.
Esi sibini sithandane malunga neminyaka emine ngaphambi kokwenza isenzo sothando sikaTimberlake. Ayisiyiyo nantoni na endakha ndacinga ukuba iza kwenzeka kum. Okanye bendifuna nyani, emva koko uBiel uxelele i Imithombo yeendaba edibeneyo . Kwaye kwenzekile, kwabonakala nje… Ilungile kanye. Kuyamangalisa.
Batshata e-Itali ngo-Okthobha u-2012.
iilokhwe ezimnandi zokunxiba emtshatweni